Dal weyn oo bilaabay inuu imtixaan ka qaado dadka isfuraya – maxaa la sameynayaa haddii ay ku dhacaan? – Filimside.net
Dal weyn oo bilaabay inuu imtixaan ka qaado dadka isfuraya – maxaa la sameynayaa haddii ay ku dhacaan?
Furriinku ma ahan wax sahlan, haddii lammaanaha isfuraya ay yihiin Soomaali ama Shiineys, laakiin si gaar ah waxaa furriinka gaara heerka maxkamadda usii adkeeyey maxkamadda Yibin People Court taasoo ku taalla Sichuan Province dalka Shiinaha.
Qareenka maxkamadda Yibin People Court Wang Shiyu ayaana wuxuu dhowaan maxkamadda ka hirgeliyey xeer cusub, kaasoo dhigaya inay lammaanaha isfuraya galaan imtixaanka furriinka ‘Divorce Exam’.
Si ay lammaanahu isku furaan, waxay ku qasban yihiin inay labaduba ku dhacaan Imtixaanka furriinka, haddii ay taasi dhacdana Maxkamadda Yibin People Court ayaa aqbali doonta dukumiintiyadooda furriinka.
Qareenka Wang Shiyu ayaa wuxuu sharraxay sababta uu imtixaankaan uga qaadayo lammaanaha isfuraya: “Dareenkeennu wuxuu yahay inaan ogaanno haddii uu guurkoodu markii hore qaab degdeg ah ku dhacay, iyo xujooyinkii ay labadoodu ishordhigeen guurka ka hor.
“Sidoo kale inta ay ku jiraan Imtixaankaan ayaa laga yaabaa inay labadoodu iska fikiraan isla markaana ay ka laabtaan go’aankoodii hore. Durba waxaa ina soo maray lammaaneyaal intii ay imtixaanka ku jiraan qalbiyadoodu isxusuusteen, kana laabtay go’aankii hore”.
Maxkamadda Yibin People Court ayaa sannad walba qabata kumanaan kiis oo furriin ah maadaama Shiinuhu uu yahay dalka ay ku nool yihiin dadka ugu badan adduunka – Imtixaankaan waxaa ku jira su’aalo gaaban iyo bayaanno.
Waxaana ka mid ah, dookha cunnada uu qof walba xiiseeyo, xilliga dhalashada xublaha qoyska, xilliga ay ku beegan tahay maalinta dabaaldegga guurkooda, qaabka ay isugu tiirsan yihiin lammaane ahaan, masuuliyadda uu qof walba u hayo qoyska, waxa wanaagsan ama waxa xun ee ay u sameyso qoyska dartiis, waxa uu la micno yahay guurku iyo waxa uu qoysku la micno yahay